Taliska AMISOM ee Somalia oo wada qorsho cusub oo lagu cirib-tirayo Shabaab - Caasimada Online
Home Warar Taliska AMISOM ee Somalia oo wada qorsho cusub oo lagu cirib-tirayo Shabaab
Taliska AMISOM ee Somalia oo wada qorsho cusub oo lagu cirib-tirayo Shabaab
Muqdisho (Caasimada Online) – Wakiilka gaar ah ee Ururka Midowga Afrika, ahna Madaxa howlgalka AMISOM, Francisco Madeira, ayaa shaaca ka qaaday in Taliska AMISOM ee magaalada Muqdisho uu la imaan doono taatiko ka bedelan kan iminka lagu shaqeeyo.
Francisco Madeira, ayaa sheegay inay bedeli doonaan dhammaan howlgalada ay iminka Somalia ka wadaan ciidamada AMISOM, waxa uuna tilmaamay inay la imaan doonaan mid kaduwan kuwa hadda la isticmaalo.
Waxa uu sheegay in ciidamada la geyn doono dhammaan Gobolada iyo Tuulooyinka dalka, si buu yiri ciidamada dowlada Somalia loogu sahlo inay gaari karaan deegaanada iminka ka xaniban oo ay ku sugan yihiin Shabaabka.
Waxa uu carab dhabay in dajinta taatikada cusub aysan qaadan doonin muddo fog, balse waxa uu cadeeyay in wakhti badan uu qaadan doono sida lagu dhaqan galin lahaa maadaama ciidamada AMISOM ay joogan deegaano kala fog fog.
Waxa uu sidoo kale sheegay in taatikada cusub ay si wada jira ugu shaqeyn doonaan ciidamada AMISOM, si buu yiri looga gaashaanto kala duwanaansho ka dhalata howlaha ay wadaan ciidamada.
Sidoo kale, dowlada Somalia ayuu ugu baaqay inay diyaariso ciidamadii laga howlgalin lahaa deegaanada ay gaaran kuwa AMISOM, iyadoo lagu wada shaqeynaayo howlgalo mideysan oo labada dhinac ah.
Geesta kale, waxa uu ka digay in la waayo ciidamo isku dhaf ah oo ka imaan kara dhanka dowlada kuwaa oo la shaqeyn doona ciidamada AMISOM ee ku shaqeyn doona taatikada cusub.